Ruzivo rwakadzama nezve "Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Yakabvarurwa Peji "
musha Products DataNumen SQL Recovery Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Yakabviswa Peji
Paunenge uchibatanidza .MDF dhatabhesi mu SQL Server, iwe unoona inotevera yekukanganisa meseji:
SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: rakabvaruka peji (rinotarisirwa siginicha: 0x ########; siginicha chaiyo: 0x ##########)). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa kwepeji (#: #) mune dhatabhesi ID # pakubvisa ### mufaira 'xxxx.mdf'. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
iko 'xxx.mdf' izita reiyo MDF faira iri kuwanikwa.
Dzimwe nguva iwe iyo .MDF dhatabhesi inogona kubatanidzwa zvinobudirira. Nekudaro, iwe paunoyedza kuita chirevo cheSQL, senge
Sarudza * KUBVA [TestDB]. [Dbo]. [Test_table_1]
iwe zvakare uchawana iri pamusoro mhosho meseji.
Iyo data mune MDF faira yakachengetwa semapeji, peji rega rega i8KB. SQL Server inoshandisa nzira mbiri kuona kuti kuenderana nekubatanidzwa kweiyo data irimo mune iyo peji, ndiko kuti, checksum kana peji rakabvaruka. Ose ari maviri anosarudzika.
If SQL Server inowana iwo akabvaruka mapeji mamwe emapeji e data asiri echokwadi, ipapo ichazotaurira kukanganisa uku.
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokanganisa iko kukanganisa:
SQL Server 2005 Kukanganisa5_1.mdf Kukanganisa5_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Kukanganisa5_2.mdf Kukanganisa5_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Kukanganisa5_3.mdf Kukanganisa5_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Kukanganisa5_4.mdf Kukanganisa5_4_fixed.mdf